I-SSL kunye ne-SEO: ngaba bobabini babalulekile?
Masiqale ngokukhumbula ezinye zezinto zakho zokusesha ezikhoyo, ukungazibali izinto ozilindeleyo, okanye ukukhangela abachasayo okanye ukufuna ezinye iimveliso okanye iinkonzo kwiWebhu.Mhlawumbi uye wavakashela ii-HTTP kunye ne-HTTPS-based web pages. Kodwa yintoni umehluko okhoyo phakathi kwabo, ngokukodwa kwimbono ye-SSL ne-SEO? Ukuqwalasela impembelelo yabo ngokubambisana kwi-e-yorhwebo kunye neninzi yesitolo sewebhu, makhe sibone indlela i-SSL ne-SEO eyenzeka ngayo ngokwenene - preco de hospedagem de site.
Ngaba i-SSL ne-SEO inokubaluleka xa isebenza kunye?
Masiqale ngenye imvelaphi yobugcisa kwaye sibone indlela i-SSL isebenza ngayo. Ukuba yinxalenye ye-Hypertext Transport Protocol Security, isebenzisa i-key-2048-bit ekhuselekileyo ukukhusela amava omsebenzisi ngokusebenzisa iinkqubo zokukhusela ukuqinisekiswa, ukuqinisekiswa kunye nokubethela phakathi kwewebhu yomsebenzisi kunye nesiphequluli sewebhu. Ngokuqinisekileyo, ukhuseleko lwe-SSL luzahlulo ezintathu:
Ukubhaliweyo kusebenza ekuqinisekiseni ukuba izenzo ezikhoyo zingabonakali, ngoko nayiphi na ingcaciso ayikwazi ukuxhatshazwa ngabagxeki
Inkqubo yokuqinisekisa iyanceda
Ingqibelelo yeenkcukacha inokuthintela nayiphi na ifayile kwi-corruption okanye ukuguqulwa okungagunyaziswanga ngexesha lokudluliselwa
Kwaye ekugqibeleni sibuyele kwinqanaba - yintoni umnxibelelwano okhoyo phakathi kwe-SSL ne-SEO? Okwenzeka njani ukuba ukhuseleko luqhuba indawo yakho yewebhusayithi kwiSiphumo seSiphumo seNjini? Njengazo zonke iipropati ezilungileyo ezinokuthi zenze impembelelo enokubakho kumgangatho wakho, kwakunye neendlela kunye nokuguqulwa kwezinga ngokwalo. Ndiyathetha ukuba ukhuseleko lakho lewebhu linokuchaphazela ngqo kwi-Google ye-algorithms yokukhangela xa ugqiba ukukunika ubunqanaba obuphezulu. Ngezantsi siza kuqwalasela intsebenziswano phakathi kwe-SSL kunye ne-SEO kwizikhokelo ezintathu ezisisiseko-i-rankings, i-traffic, kunye nokuguqulwa:
Njengoko sele kukhankanywe, i-rankings yakho kwiwebsite ngoku ixhomekeka ngakumbi kwi-SSL ukhuseleko kunanini ngaphambili. Ukujonga emva ko-2014-2015 xa i-Google ikhuphe izilungiso zayo zokuqala ukufumana amaphepha ewebhu asekelwe kwi-HTTPS, ukhuseleko lwe-SSL lusetyenziswa nje ukuba lusetyenziso lwe-algorithm ekukhanyeni ukwenza isigqibo sokugqibela. Kodwa namhlanje, ngokwemibare yamagosa, malunga nesiqingatha seziphumo zophando ze-Google zibhekisela kumawebhusayithi ase-HTTPS asekelwe kwiSitifiketi se-SSL. Ngaphezu koko, malunga neepesenti eziyi-1 zonke izikhokelo ze-intanethi kwi-Intanethi ziqikelelwa zikhuselekile. Ngoko, kutheni ungasebenzisi i-SSL ne-SEO nje ukuba uphumelele ukhuphiswano, kanye naphakade?
Ukuqwalasela ukuzuza kwezithuthi, ukulungiswa ngokubhekiselele kwikhompyutha ngokubanzi kuhambisa umzila omkhulu wokuhamba kweendlela, ngenxa yokuba abasebenzisi abangaphezulu bavakashela iwebhusayithi yakho, abaphulaphuli ababanzi uza kuba nxaxheba. Ngaphezu koko, ukhuseleko lwewebhu olukhoyo lunikeza bonke abathengi abathengela kwi-intanethi uphawu olusebenzayo kwi-website yakho igunya kunye nokuthembeka. Uninzi lwabasebenzisi banqumla yonke imithombo engaphephile kwaye nqakraza kwisiphumo sokubakhokela kumaphepha akho ewebhu, ngokunika i-CTR yesayithi.
Emva koko, i-SSL kunye ne-SEO inokusebenzisana kunye nokwenza ukuguqulwa kwakho. Ndiyathetha ukuba abaninzi abathengi banokuguqulwa baba yiyinyani, emva kokuba batyelele iwebhusayithi yakho ekhuselekile kunye negunya elithembekileyo. Khawukhumbule nje ukuba ngokweengxelo eziphambili, abaxhasi abangaphantsi kwe-80% baya kukwenqaba ukuzibophezela kwabo ukuthenga, ekufumaneni nje ukuba idatha yabo egciniweyo egciniweyo ivela kwi-connection.